PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - Kungaba kuhle ukubuyela kwamandla emnyangweni
Kungaba kuhle ukubuyela kwamandla emnyangweni
INGCABHA isePhalamende ukuthi ligunyaze noma lichithe umthethosivivinywa i-Basic Laws Amendment Bill. Ngalo mthethosivivinywa umnyango wemfundo eyisiSekelo ufuna ukubuyisa amandla athinta ukuqasha othisha, othishanhloko, wukunquma ngemigomo ethinta ukwamukelwa kwabafundi nethinta izilimi ezisetshenziswa ezikoleni.
Sikhulu isikhalo ikakhulu ezigungwini zabazali ezimele izikole okwakungezabamhlophe ngoba ezinemigoqo ethinta ukwamukelwa kwabafundi.
Baningi abazali abahlale bekhala ngokuthi izingane zabo ziyachithwa ngoba bengahlali noma bengasebenzi emadolobheni eduzane nalezi zikole. Abazali basuke befuna imfundo engcono yezingane zabo ngokuziyisa kulezi zikole kodwa bachithwe.
Uma ugcina ngokuphasiswa lo mthetho izobe idubukele kubazali ngoba izigungu ezibeka imigoqo ethintwa ukwamukelwa kwabafundi zizobe seziphucwe amandla, yonke into isilele emnyangweni.
Enye yezinto eseqhulwini kulo mthethosivivinywa wukuqashwa kothishanhloko.
Umnyango wamukela igama eliphakanyiswe yisigungu sabazali uma kuqashwa uthishanhloko noma othisha.
Akujwayele ukuthi igama eliphakanyisiwe wumnyango ulishaye indiva njengoba izigungu zinikiwe lawa mandla. Ngokwalo mthetho izigungu zizoqhubeka zihlale esigcwawini sokuphonswa kwemibuzo kwalabo abasuke befuna umsebenzi kodwa izwi lokugcina lokuthi ubani othathwayo lizoqhamuka emnyangweni.
Kuyaziwa ukuthi kwezinye izikole izigungu zabazali kuba ngabantu abasuke bengafundanga.
Laba bazali bezwa ngothishanhloko ngezinqumo okumele zithathwe ezithinta izikole, abazali bagcina bengasenalo izwi.
Njengoba kube nombiko oveza ukudayisa kwezikhala zothisha kuleli, uma umnyango sekuyiwona oqashayo mhlawumbe lo mkhuba uzoncipha ngoba kuthi kuyiwa kohlonywa imibuzo abantu abasuke befuna umsebenzi kusuke sekwaziwa ukuthi ngubani osethathiwe, sekuxoxiwe nesigungu esilawula isikole.
Kungakuhle uma amanye amandla abuyele emnyangweni, ikakhulu njengoba kunesiphakamiso sokuthi kumele othishanhloko babe nezinkontileka zokusebenza ngokuzikhandla.